स्वास्थ्य Archives - Page2of9- Eall Nepal
आधुनिक जीवनमा टन्सीलाईटीस अर्थात घाँटीको समस्याले प्राय: जसो घरका एक सदस्य खासगरी केटा-केटिहरुलाई बेलाबखतमा दुख: दिइरहेको हुन्छ । टन्सील शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । जसले नाक र मुखबाट पसेका किटाणुहरुलाई नष्टगर्ने ...
मुटु रोग लाग्नुका धेरै कारण छन् । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपना, अत्यधिक मदिराको सेवन, धुम्रपान, मानसिक तनाव, कोलेस्ट्रोल, शारीरिक निष्कृयता लगायतका थुप्रै कारणले मुटु रोग लाग्न सक्छ । यी सामान्य विषयका वारेमा धेरैलाई जानकारी छ ...
सुत्केरी महिलाका लागि जानकारी मूलक टिप्सः स्वास्थ्य संस्थामा नर्मल डेलीभरी गराउन चाहाने महिलाले ध्यान दिनु पर्ने यी काम लाग्ने टिप्स
एजेन्सी । गर्भवती हुनु एक महिला आमा बन्नु हो । यो प्रक्रिया जति रोमाञ्चकारी हुन्छ कहिलेकाँहि त्यो भन्दा धेरै जटिल पनि बन्छ । नौ महिनाको गर्भवस्थाको समय हरेक महिलाको लागि ज्यादै कष्टदायी हुन्छ तर यसपछि ...
मेरो उमेर २५ वर्ष भयो । म आफ्नी श्रीमतीसँग यौनसम्पर्कका साथसाथै मुख मैथुन पनि गर्छु । योनिबाट आएको पानीले कुनै रोग लाग्छ कि लाग्दैन ? ७६३४ तपाईंहरूबीच खुलेर यौनसम्पर्क हुने बुझिन्छ र आशा गर्छु, तपाईंहरूले ...
तपाईँको दाँतमा किरा लागेको छ ?छैन ? छैन भने ठिकै छ । यदीे छ भने त बेला बेलामा दुखाईको अनुभव पनि लिइरहनु भएको छ होला ? तपाईँ मात्रै होइन नेपालमा झण्डै ८० प्रतिशत बढी मानिसहरु ...
लसुन, जो हाम्रो भान्सामा दैनिक प्रयोग हुन्छ । तरकारीको स्वादर वास्ना बढाउनका लागि लसुन उपयोगी हुन्छ। यद्यपी लसुनको साइनो स्वादसँग मात्र जोडिएको छैन । खाली पेट लसुन खानुको अरु थुप्रै फाइदा छन्। यदि हरेक दिन ...
समाजमा छोरा या छोरी नजन्मिएकै कारण कैयौ परिवारमा द्वन्द्व हुने गर्दछन् । यसकै कारण कयै महिलाले मानसिक र शारिरीक यातना भोगिरहेका घट्नाहरु छन् । कतिपय महिलाले यसैको कारण सौता त कतिपयले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपरेका घटनाहरु ...
चुरोट खानेलाई मात्रै होइन अन्य मानिसलाई पनि फोक्सोको समस्या हुनेगर्दछ । यदि तपाईले चुरोट खानुहुन्छ भने फोक्सो अवश्य खराब हुन्छ । तर घरेलु विधि प्रयोग गरेर ७२ घण्टाभित्र आफ्नो फोक्सो सफा गर्न सक्नुहुन्छ । यस्तो ...
धेरैको साझा समस्या र जिज्ञासा हो हातखुट्टा झमझम गर्नु । प्रायःले बिनासित्ति हातखुट्टा झमझम्याइरहेको महशुस गर्छन् । खाशमा यसो हुनुको ६० देखि ७० प्रतिशत कारण मानसिक हो । मानसिक रुपमा त्यस्तो महशुस गरेर धेरैले आफूलाई ...
नेपालको नामी वकिल बन्ने उद्देश्य बोकेर बझाङबाट काठमाडौं छिरेका थिए । नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल गरेका उनले डिल्लीबजारमा ल फर्म पनि खोले । केही समय वकालत गरेपछि उनलाई वकालती पेशामा मन लागेन, उनी आफ्नै गाउँ ...